Baolina kitra - CAN 2021 :: Mamaramparana ny fandrafetana ny lisitr’ireo mpilalao i Nicolas Dupuis • AoRaha
Ankatoka ny daty 23 marsa 2020 hatramin’ny 31 marsa 2020 hanatontosana ny lalao mandroso, any Abdijan, sy ny fihaonana faharoa, eto an-toerana , eo amin’ny Barea sy i Côte d’Ivoire amin’ny dingana fifanintsanana ao anatin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2021. Mamita ny lisitra faramparany i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena, amin’izao fotoana izao.
“Niara-nandinika izahay sy ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Hamoaka ny lisitr’ireo mpilalao aho, amin’ny faran’ity herinandro ity”, hoy itsy teknisianina frantsay itsy.
Ho vitsy na mety tsy hisy mpilalao mivoatra eto an-toerana ao anatin’ny lisitra, raha ny filazan’i Nicolas Dupuis. Nanamafy izy fa “ny fahaizan’ireo mpilalao tsirairay avy no ahatafidirany na tsia ao anaty lisitra. Tsy miankina amin’ny maha mpila ravinahitra azy kosa ny fifantenana”.
Samy hafa ny lisitr’ireo mpilalao handeha any Abdijan sy ireo hiatrika ny lalao miverina. “Ferana ny isan’ny delegasiona handeha any Côte d’Ivoire. Hampitomboako kosa ny isan’izy ireo amin’ilay fifandonana eto Madagasikara”, araka ny fanazavan’i Nicolas Dupuis. Mandroso ny fanomanan’ny Barea an’io dingana fifanintsanana io.
Herinandro kosa izay no nanesorana an’i Ibrahim Kamara ilay mpanazatra an’i Côte d’Ivoire teo aloha. Baraingo, noho izany, ny fanomanana an’ireo lalao roa ireo ho an-dry zareo Ivoarianina. Mbola tsy manana mpanazatra i Côte d’Ivoire hatreto. Ao anatin’ny fitadiavana an’izay teknisianina handray azy ireo ny Federasiona ivoarianina (FIF), amin’izao fotoana izao.
Mety i Sébastien Desabre izay teknisianina frantsay mpanazatra ny klioba maraokanina, Wydad Athletic Club, no handray ny ekipa ivoarianina raha ny navoakan’ny gazety tany an-toerana.
Fanatsarana ny fitsaboana Handray ireo mararin’ny « Covid-19 » koa ny CCO eny Ivato
Ahiahina kolikoly :: Raikitra ny fikarohana an’i Arizaka Raoul Rabekoto
Kitra – » Orange pro league » :: Handray lalao goavana telo ny kianjan’ny By Pass